Iindaba - INGXELO
Maqabane oshishino nababoneleli,
Kutshanje, kuye kwafumaniseka ukuba kukho iinkampani nabantu abasebenzisa ngokungekho mthethweni igama lenkampani kunye nedilesi (Shijiazhuang Mets Machinery co., Ltd NO.1 Changjiang Road Shijiazhuang 050035 Hebei China Umnxeba: 86-311-68058177) kunye nolunye ulwazi lwenkampani thumela i-imeyile eluntwini ubuza ii-invoice, ulwazi loku-odola njlnjl. Amashishini amaninzi afumene ii-imeyile ngaphandle kokwazi inyani abuze inkampani yethu malunga ne-imeyile amaxesha amaninzi, kwaye siyichazile ngomonde.
Oku kuziphatha kungasentla ngokungekho semthethweni kokusebenzisa ngobuqhetseba ulwazi lwenkampani akubangeli kuphela iziphumo ezibi kwinkampani yethu, kodwa kukwabangela ingozi efihliweyo kwinkampani efumana ezi imeyile zokukhohliswa. Ukuthintela oku kungenzeki kwakhona, ngokwenjenje sibhengeza ngolu hlobo lulandelayo:
Asiyazi indlela yokuziphatha yabasebenzi ngokungekho semthethweni yokusebenzisa ulwazi lwenkampani yethu ukukhupha ii-imeyile kuluntu, kwaye ezi imeyile zilapha ngasentla azinanto yakwenza nenkampani yethu.
2. Inkampani yethu ayikaze igunyazise nayiphi na inkampani okanye umntu ongaphandle kwenkampani yethu. Ukuthintela ukukhohliswa, ishishini lokufumana i-imeyile linokubuza ngokuthe ngqo ngokusitsalela umnxeba ukuba siqinisekise ubunyani. (Ifowuni yenkampani yokujonga: 0311-68058177.)
3. Ukwenzela ukohlwaya olu lwaphulo-mthetho, inkampani yethu iye yaxela eli tyala kwisebe lokhuseleko loluntu malunga nokuziphatha ngokungekho mthethweni okukhankanywe ngasentla, kwaye silindele uncedo lwesebe lokhuseleko loluntu kuphando.
Isishwankathelo, inkampani yethu lishishini egxile kwiimveliso zempompo oluludaka kunye neenkonzo iminyaka emininzi. Inkampani ihlala ijonga umgangatho wemveliso njengobomi benkampani, ibambelela kumgaqo osebenzayo osisiseko kubasebenzisi, isebenzisa eyona ndawo yokugcina izinto yokugcina izinto kunye neqela lobuchwephesha emva kokuthengisa ukukhonza kushishino lwezemigodi kunye noluntu.
Siyaqinisekisa ngale ndlela!
Ixesha Post: Jan-23-2021